JAWAARI: 100 milyan oo dollar ayaa lagu dhisayaa guriga Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya | SAHAN ONLINE
JAWAARI: 100 milyan oo dollar ayaa lagu dhisayaa guriga Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya
MUQDISHO – Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa soo bandhigay qorshe cusub oo lagu dhisayo guriga Baarlamaanka oo ku burburay dagaaladii sokeeye.
Jawaari oo ka hadlayay Barnaamij si toos ah uga baxayay Telefishinka dowladda ee SNTV oo lagu qabtay Muqdisho kana soo qeybgaleen dad badan ayaa la weydiiyay sababta muddo sanooyin ah loo dhisi la’yahay gurigaas.
Wuxuuse kaga jawaabay” Gurigaas waa guri sharaf leh, magaciisa waxaa la yiraahdaa Golaha Ummadda, wuxuuna mudanyahay in uu yeesho guri u dhigma (meeqaamkiisa) oo magaalo madaxda ka dhex muuqda, lacag badan ayuu u baahanyahay, waxaa is weeydiin mudan sababta aan u dhex fadhino isaga oo jajaban”.
Guddoomiye Jawaari ayaa hadalkiisa ku daray in xikmadu tahay maadaama ay dadka burburiyeen in ay ku waano qaataan,maalin kastana ay xusuus u noqoto marka ay burburkiisa arkaan,si aanan mar kale loo burburin.
Wuxuu xusay in sida gurigaas u burburay,dadkuna maskaxdooda u burburtay.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in guriga gebi ahaantiisa la burburin doono,Baarlamaankana u guuri doono meel kumeel gaar ah oo uu kusii shaqeeyo,kaddibna la bilaabi doono dhismaha guriga.
Biloowga sanadka soo socda dumis ayaa lagu bilaabaa, lacag badan ayuu u baahanyahay, wajiga koowaad oo kaliya waa $60 milyan oo doolar, 7 dabaq ayuu noqonayaa oo xildhibaan kasta uu xafiiskiisa gaarka ah leeyahay, oo labada aqalba ay galayaan, shirarka adduunkana lagu qabanayo, illaa 100 milyan waa gaaraa, hadda ma hayno lacag, balse alle mahadiis dowladda Turkiga ayaa ogolaatay in ay bixiso” ayuu yiri Prof Jawaari.
Guddoomiyaha golaha shacabka ayaa dadweynaha uga jawaabayay su’aalo badan oo ay ka qabeen arrimaha Baarlamaanka.